Ehi nju - China Ningbo enweghị
ehi Igwe Ọdụdọ
Ihe: Efere Igwe Ọdụdọ ma ọ bụ AlNiCo Igwe Ọdụdọ
ọkwa: Y30 / Y30BH, alnico 5, alnico 2
Size: 3/4 "Dia. X 3-3 / 8 "Long, D12.7 * 50.8mm, D12.7 * 76.9mm ma ọ bụ Dị ka chọrọ nke Ahịa
Packaging: Standard ngwugwu n'ihi Air Transportation & Sea Transportation
Enweghị Magnetik CompanyLimited nwere ike hazie ehi nju maka ndị ahịa 'ngwa.
Ehi magnet bụ ụdị adịgide adịgide magnet ngwaahịa-eji dị ka a na ngwaọrụ ụlọọgwụ na-emeso ma ọ bụ gbochie nke ngwaike ọrịa nke mfe mere na ehi / ehi. N'oge na-ata nri na ugbo, ehi ma ọ bụ ehi-emekarị rie ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị ka mbọ ma ọ bụ ndị ọzọ dara akụkụ si ahịhịa. Ha adịghị ata nri kpamkpam ma loo ha ozugbo.
The mbọ na ndị ọzọ nkọ dara ihe ike-gbarie na nke ga-abụ isi ihe kpatara nke ngwaike ọrịa.
Efere Ehi nju
Na otu aka, ehi magnet nwere ike na-adọta dara ihe dị ka mbọ, kposara na wires si ndepụta. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ndị a dara ihe na-loro ehi site na mberede, a ehi magnet nwere ike gafere ọnụ site a tube n'ime rumen nke ehi na-adọta ígwè akụkụ. Ehi nju pụrụ isi chebe ndị digestive tract na a mebiri site nkọ mbọ ma ọ bụ ndị ọzọ ígwè akpọkwa na-echebe ehi afo. A ga-enweghị ihe ọ bụla mmetụta na niile.
Biko chere free iji zipu anyị ihe ase ma ọ bụrụ na ị na-achọ seramiiki / ferrite ehi magnet ma ọ bụ alnico ehi magnet.
Osote: Industrial nju
Bar Igwe Ọdụdọ
Car Sign nju
Electro Magnetik Chuck
Igwe Ọdụdọ Bar
Igwe Ọdụdọ Chuck
Igwe Ọdụdọ Device
Igwe Ọdụdọ Manufacturer
Igwe Ọdụdọ Seperator
Igwe Ọdụdọ sọọsọ
Magnetik inkjet printable Akwụkwọ
Magnetik Photo ụba
Water Ọgwụgwọ Igwe Ọdụdọ Bar
ịgbado ọkụ magnetik